बोलिवूड – Complete Nepali News Portal
बोलिवूड	३ दिनमा पर्व’को करोड कुल (ग्रस) कमाई
June 20, 2017	बोलिवूड
शुक्रबारबाट रिलिज भएको फिल्म ‘पर्व’ले ३ दिनमा करोड ग्रसको कमाई गरेको यसको निर्माणपक्षले बताएको छ । निर्माता सुवास गिरीले दिएको जानकारी अनुसार फिल्मले ३ दिनमा करोड ग्रसको व्यापार गरेको हो । बलियो वर्ड अफ माउथका कारण फिल्मले सोमबार बिहानैदेखि सुखद व्यापार गरिरहेको छ । सोमबार परेको सार्वजनिक बिदाका कारण फिल्मलाई …
June 9, 2017	बोलिवूड
काठमाडौं । निखिल उप्रेती नेपाली सिनेमा जगत्का चर्चित नायक हुन् । चलचित्र पिँजडाबाट आफ्नो करिअर सुरु गरेका उप्रेतीका थुप्रै फ्यान छन् । तर, उनको बिर्सने बानीले धेरैलाई भुलिसके, तर कतिपय यस्ता फ्यान छन् जसलाई बिर्सन सक्दैनन् । तिनै फ्यानको किस्सा उप्रेतीले गज्जबका महेश तिमल्सिनालाई सुनाए । मेरो एक्सनको नक्कल गर्न …
May 30, 2017	बोलिवूड
‘I Love You Santaram’ With Takme Budha Kathmandu, 30th May: Wilson Bikram Rai popularly known as ‘Takme Budho’ is busy promoting his upcoming Nepali film ‘Raato Ghar’ and at the same time busy shooting Bollywood films. He will soon star opposite Ayesha Takia which has already started creating buzz. The …
बलिउडका बादशाह खान अर्थात शाहरुख खान ५१ बर्षका भए उनि अझैसम्म पनि २०-२२ बर्षकी हिरोइनहरु सँग रुपमा रोमान्टिक हिरोको भूमिकामा अभिनय गरिरहेका छन्। उमेरले बुढेशकाल लागेपनि जोश-जाँगर र शाररिक अबस्थामा उनि पर्फेक्ट देखिन्छन्। उता बाबु शाहरुखले फिल्मी पर्दामा हिरोइनहरु सँग रोमान्स गरिरहेका छन् भने,यता छोरि सुहाना १७ बर्षमा लागेर बलिउडमा …
May 3, 2017	बोलिवूड
April 30, 2017	बोलिवूड
एजेन्सी- मोडल तथा अभिनेत्री सोनिका चौहानको हिजो कार दुर्घटनामा परी निधन भएको छ । बंगाली टेलिभिजनका चर्चित कलाकार विक्रम चटर्जीको साथमा रहेकी उनको कारको सन्तुलन विग्रिएर कार सडक छेउकै डिभाइडरमा गएर ठोक्किदा उनको मृत्यु भएको बताइएको छ । उनलाई अस्पताल पुर्याए लगत्तै मृत घोषित गरिएको थियो । यो डरलाग्दो घटनामा …
एजेन्सी- चर्चित बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा बलिउड हुँदै हलिउडमा धेरै नै व्यस्त हुन थालेकी छिन् । केही दिन अघि मात्र भारत आएकी उनको यति बेला राम्रो चर्चा भएको छ । भारत आएर उनले आफ्नै घरमा बलिउड कर्मीलाई डिनर पनि गराएको कुरा बाहिर आएको थियो । तर फेरी उनी अमेरिका नै …
April 27, 2017	बोलिवूड
बलिउडका चर्चित अभिनेता बिनोद खन्नाको ७० बर्षको उमेरमा निधन भएको छ । पछिल्लो समय ब्लड क्यान्सरका कारण थलिएका खन्नाको मुम्बईको एचएन रिलायन्स फउण्डेशन एण्ड रिसर्च सेन्टरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । सन् १९६८ मा ‘मन का मीत’ फिल्मबाट आफ्नो फिल्मी क्यारियर शुरु गरेका थिए। जुन फिल्ममा …
April 26, 2017	बोलिवूड
फिल्म ‘रुस्तम’ को लागी नेशनल अवार्ड पाएका बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारले मुम्बईमा आयोजित एक प्रेस कन्फ्रेन्समा भने-‘मैले पाएको अवार्ड फिर्ता लिनुछ भने लिए हुन्छ।’ अक्षय कुमारलाई नेशनल अवार्ड दिइएपछि बिबाद भएको थियो। धेरैले अवार्डको असली हकदार अक्षय कुमार नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। सामाजिक सन्जालमा समेत यस बारेमा खुलेरै बिरोध भएको …
April 17, 2017	बोलिवूड
निता अम्बानी भारतकी सबैभन्दा धनी मुकेश अम्बानीकी पत्नी हुन् । उनी आफै पनि बिजनेश वुमन हुन् ।मुम्बईमा बिश्वको सबैभन्दा महँगो घरमा बस्छिन्। प्रसश्त पैसा भएपछि संसारमा नहुने र आफुले गर्न नसकिने कुनै कुरै छैन । निता अम्बानीको लागी पनि पैसा ठुलो कुरा होइन । त्यसैले उनले आफ्नो शौख पुरा गर्न …